ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ နှငျ့ ​အေ​အေ – Kyaw Zaw Oo's Blog
November 13, 2019 January 13, 2020 web_master
ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ နှငျ့ ​အေ​အေ
ပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​ နှင့်​ ​အေ​အေ
ဒီက​နေ့ အခုနက ပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​မှာ ​အေ​အေနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ အ​ရေးကြီးအဆိုတစ်​ရပ်​ကို ​ဆွေး​နွေးသင့်​မသင့်​ ဆုံးဖြတ်​ကြမယ်​လို့ ဆိုပါတယ်​။
တစ်​။ စစ်​မှန်​​သော ဖက်​ဒရယ်​ စနစ်​တစ်​ရပ်​​ပေါ်​ပေါက်​ဖို့ရန်​အတွက်​ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်​ကြစတမ်းဆိုရင်​ ဒီပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​ဆိုတဲ့ စနစ်​ကို ဖျက်​သိမ်းကြရပါမယ်​။
နှစ်​။ လူများစု ဒီမိုက​ရေစီနဲ့ လူနည်းစု အခွင့်​အ​ရေးကို အထိန်းအ​ထေ ပြုနိုင်​ဖို့ရာ – လူများစုကို ကိုယ်​စားပြုတဲ့ ပြည်​သူ့လွှတ်​​တော်​ နဲ့ လူနည်းစု​​တွေကို ကိုယ်​စားပြုတဲ့ (သို့မဟုတ်​၊ ကိုယ်​စားပြုချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ထားတဲ့) အမျိုးသားလွှတ်​​တော်​ တို့ဟာ တန်းတူရည်​တူ အခွင့်​အာဏာ ရှိကြရပါမယ်​။
သုံး။ အဲသလိုတန်းတူရည်​တူ အခွင့်​အာဏာ ရှိနိုင်​ကြဖို့ရာ – ပြည်​သူ့လွှတ်​​တော်​နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်​​တော်​ ဆိုတဲ့လွှတ်​​တော်​ နှစ်​ရပ်​တို့ကို တစ်​ပူးတစ်​​ပေါင်းတည်း မကျင်းပဖို့လိုပါတယ်​။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ အဲသလို ပူး​ပေါင်းကျင်းပလို့ မဲခွဲတိုင်းမှာ အမတ်​ဦး​ရေများတဲ့ (လူဦး​ရေ ကိုယ်​စားပြု) ပြည်​သူ့လွှတ်​​တော်​က အမြဲတမ်းအသာစီးရ​နေလို့ပါပဲ။ ​နောက်​တစ်​ချက်​က လူနည်းစု​တွေရဲ့ သီးခြားဆုံးဖြတ်​ပိုင်​ခွင့်​ နဲ့ သီးခြားအသံပြုပိုင်​ခွင့်​ကို လာ​ရောက်​ထိခိုက်​​နေလို့ ပါပဲ။
​လေး။ အဲဒီအချက်​​တွေ​ကြောင့်​မိုလို့ ပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​ဆိုပြီး လွှတ်​​တော်​ နှစ်​ရပ်​ကို ပူးတွဲကျင်းပ ​ရော​နှောဆုံးဖြတ်​တာဟာ လွှတ်​​တော်​နှစ်​ရပ်​ရဲ့ တန်းတူရည်​တူဖြစ်​မှုကို ပျက်​ပြား​စေပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​မို့လို့ စစ်​မှန်​​သော ဖက်​ဒရယ်​ ပြည်​​ထောင်​စုတစ်​ရပ်​ကို ​ပေါ်​ပေါက်​​စေလိုရင်​ ပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​ဆိုတဲ့ ပူးတွဲ လွှတ်​​တော်​စနစ်​ကို ဖျက်​သိမ်းပစ်​ကြရပါမယ်​။
ငါး။ ဒါ​ကြောင့်​မို့လို့ လူနည်းစုအသံကို ဖိနှိပ်​ပြီး လူများစုကြီးစိုး​ရေးအတွက်​ စနစ်​တကျ ဒီဇိုင်းဆွဲတည်​​ထောက်​ထားတဲ့ ပြည်​​ထောင်​စုလွှတ်​​တော်​ဟာ လူများစုအကျိုးကိုတစ်​ဖက်​သတ်​​ဖော်​​ဆောင်​​သော . . . အဲသည်​လူအုပ်​စုကြီးရဲ့ လက်​ကိုင်​ဒုတ်​​တွေကို အကာအကွယ်​​ပေး​သော . . . ဆုံးဖြတ်​ချက်​​တွေကို အများအကာ့ များရာစုအ​ခြေအ​နေ​တွေမှာ ချမှတ်​ ဆုံးဖြတ်​​နေကြမယ်​ ဆိုတဲ့အချက်​ဟာ ​မြေကြီးလက်​ခတ်​မလွဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
၂၀၁၉ နိုဝင်​ဘာလ (၁၃) ရက်
ဒီက​နေ့ အခုနက ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​မှာ ​အေ​အနေဲ့ ပတျ​သကျ​တဲ့ အ​ရေးကွီးအဆိုတဈ​ရပျ​ကို ​ဆှေး​နှေးသငျ့​မသငျ့​ ဆုံးဖွတျ​ကွမယျ​လို့ ဆိုပါတယျ​။
တဈ​။ စဈ​မှနျ​​သော ဖကျ​ဒရယျ​ စနဈ​တဈ​ရပျ​​ပျေါ​ပေါကျ​ဖို့ရနျ​အတှကျ​ ဒီဖှဲ့စညျးပုံကို ပွငျ​ကွစတမျးဆိုရငျ​ ဒီပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ဆိုတဲ့ စနဈ​ကို ဖကျြ​သိမျးကွရပါမယျ​။
နှဈ​။ လူမြားစု ဒီမိုက​ရစေီနဲ့ လူနညျးစု အခှငျ့​အ​ရေးကို အထိနျးအ​ထေ ပွုနိုငျ​ဖို့ရာ – လူမြားစုကို ကိုယျ​စားပွုတဲ့ ပွညျ​သူ့လှတျ​​တျော​ နဲ့ လူနညျးစု​​တှကေို ကိုယျ​စားပွုတဲ့ (သို့မဟုတျ​၊ ကိုယျ​စားပွုခငျြ​​ယောငျ​​ဆောငျ​ထားတဲ့) အမြိုးသားလှတျ​​တျော​ တို့ဟာ တနျးတူရညျ​တူ အခှငျ့​အာဏာ ရှိကွရပါမယျ​။
သုံး။ အဲသလိုတနျးတူရညျ​တူ အခှငျ့​အာဏာ ရှိနိုငျ​ကွဖို့ရာ – ပွညျ​သူ့လှတျ​​တျော​နဲ့ အမြိုးသားလှတျ​​တျော​ ဆိုတဲ့လှတျ​​တျော​ နှဈ​ရပျ​တို့ကို တဈ​ပူးတဈ​​ပေါငျးတညျး မကငျြးပဖို့လိုပါတယျ​။ ဘာ​ကွောငျ့​လဲဆို​တော့ အဲသလို ပူး​ပေါငျးကငျြးပလို့ မဲခှဲတိုငျးမှာ အမတျ​ဦး​ရမြေားတဲ့ (လူဦး​ရေ ကိုယျ​စားပွု) ပွညျ​သူ့လှတျ​​တျော​က အမွဲတမျးအသာစီးရ​နလေို့ပါပဲ။ ​နောကျ​တဈ​ခကျြ​က လူနညျးစု​တှရေဲ့ သီးခွားဆုံးဖွတျ​ပိုငျ​ခှငျ့​ နဲ့ သီးခွားအသံပွုပိုငျ​ခှငျ့​ကို လာ​ရောကျ​ထိခိုကျ​​နလေို့ ပါပဲ။
​လေး။ အဲဒီအခကျြ​​တှေ​ကွောငျ့​မိုလို့ ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ဆိုပွီး လှတျ​​တျော​ နှဈ​ရပျ​ကို ပူးတှဲကငျြးပ ​ရော​နှောဆုံးဖွတျ​တာဟာ လှတျ​​တျော​နှဈ​ရပျ​ရဲ့ တနျးတူရညျ​တူဖွဈ​မှုကို ပကျြ​ပွား​စပေါတယျ​။ ဒါ​ကွောငျ့​မို့လို့ စဈ​မှနျ​​သော ဖကျ​ဒရယျ​ ပွညျ​​ထောငျ​စုတဈ​ရပျ​ကို ​ပျေါ​ပေါကျ​​စလေိုရငျ​ ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ဆိုတဲ့ ပူးတှဲ လှတျ​​တျော​စနဈ​ကို ဖကျြ​သိမျးပဈ​ကွရပါမယျ​။
ငါး။ ဒါ​ကွောငျ့​မို့လို့ လူနညျးစုအသံကို ဖိနှိပျ​ပွီး လူမြားစုကွီးစိုး​ရေးအတှကျ​ စနဈ​တကြ ဒီဇိုငျးဆှဲတညျ​​ထောကျ​ထားတဲ့ ပွညျ​​ထောငျ​စုလှတျ​​တျော​ဟာ လူမြားစုအကြိုးကိုတဈ​ဖကျ​သတျ​​ဖျော​​ဆောငျ​​သော . . . အဲသညျ​လူအုပျ​စုကွီးရဲ့ လကျ​ကိုငျ​ဒုတျ​​တှကေို အကာအကှယျ​​ပေး​သော . . . ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​​တှကေို အမြားအကာ့ မြားရာစုအ​ခွအေ​နေ​တှမှော ခမြှတျ​ ဆုံးဖွတျ​​နကွေမယျ​ ဆိုတဲ့အခကျြ​ဟာ ​မွကွေီးလကျ​ခတျ​မလှဲ ဖွဈ​ပါတယျ​။
၂၀၁၉ နိုဝငျ​ဘာလ (၁၃) ရကျ
Previous ပလကျ​ဝမွို့နယျ​ သို့မဟုတျ​ ဥဿလငျးတိုငျး
Next လာတယျ​ဆိုရငျ​ ကွို​နဦေးမှာ